«Fa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra; koa hendre ka mahonòna tena ho amin'ny fivavahana» - 1 Pet. 4:7.
Mino ve ianao fa efa akaiky ny faran'ny zavatra rehetra, ka ny sehatry ny tantaran'ity tany ity dia mikatona haingana? Raha izany dia asehoy ny finoanao amin'ny asanao. Haneho ny finoana rehetra ananany ny lehilahy iray. Mihevitra ny sasany fa manana finoana tsara izy ireo kanefa raha ananany izany dia maty satria tsy tohanany amin'ny asa. «Ny finoana raha tsy misy asa, dia maty mihitsy». Vitsy no manana izany finoana marina izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy izany. Fa ireo rehetra izay voatsara ho mendrika ny fiainana mandrakizay dia tokony hahazo fahafahana ara-tsaina ho an'izany zavatra izany ihany koa. «Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy». Izany no asa manoloana anareo (...)
Tokony vonoina ny izaho ary tokony hivelona ho an'Andriamanitra. «Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy hianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra». Tsy tokony hanontaniana ny amin'ny tena. Ny avonavona, ny fitiavan-tena, ny fahihirana, ny filana, ny fitiavana izao tontolo izao, ny fankahalana, ny ahiahy, ny fialonana, ny sain-dratsy dia tokony ho voafehy avokoa ary hafoy mandrakizay. Rehefa hiseho i Kristy dia tsy ho fanitsiana ireo ratsy izany ka hanome fahafahana ara-tsaina amin'ny fiaviany. Izany fiomanana izany dia tokony ho vita mialoha ny fiaviany. Hevitra manac ahoana no tokony hodinihina, hianarana ary hohadihadina mba hahatonga antsika ho voavonjy? Inona ny ho fitondran-tena ataontsika mba hahatonga antsika hohamarinin'Andriamanitra?
Raha alaim-panahy himenomenona ianao, hanome tsiny, hitroatra, handratra ireo manodidina anao ary handratra ny fanahinao koa, oh! Aoka ny fanadihadiana lalina, matotra ary amim-pitaintainana ho avy amin'ny fanahinareo manao hoe: hahajoro tsy misy fahadisoana eo anoioan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ve aho? Izay tsy manam-pahadisoana ihany no ho any. Tsy misy na iza na iza hafindra any an-danitra raha mbola feno ny loton'ny tany ny fon'izy ireo. Tsy maintsy hahitsy avokoa aloha ireo fahadisoan'ny toe-tsaina, ny pentina tsirairay izay esorin'ny ran'i Kristy mpanadio, ary ireo karazan-toetra ratsy sy tsy maha-te ho tia. TFC, 1:704, 705